Kaliya Mobile Alubase, xarkaha fiilada wireless-ka ee desktop-kaaga | Wararka IPhone
Kaliya Mobile Alubase, xarkaha fiilada wireless-ka ee desktop-kaaga
Xeedho aan xad lahayn waxaa jira kuwo badan, boqolaal iyaga ka mid ah iyo dhammaan qiimaha suurtagalka ah. Laakiin haddii aan rabno xeedho wireless ah oo leh naqshad u qalanta in la dhigo meel kasta oo mudnaan leh miiskeena, sheygii wuu is badalay oo wey yaraadeen. Iyo liiskaas mudnaanta leh shaki kuma jiro saldhigga Alubase ee Just Mobile.
Ka samaysan aluminium, oo la jaan qaadi kara amarka degdegga ah ee iPhone, awood u leh inay ku soo dallacaan AirPods cusub sanduuqa wireless iyada oo aan dhibaato yar lagugu halayn karin ugu badnaan, Meeshan lacag la'aanta ah ee wireless-ka ku shubata ayaa kufiican iMac-gaaga ama MacBook-gaaga. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta oo ay weheliso dareennadayada hoose.
1 Tayada sare iyo qaabeynta
2 Fikirka Tafatiraha
Tayada sare iyo qaabeynta
Markii aan ka hadlayno lacag-bixinta wireless-ka ah, waxaa jira dad badan oo u maleynaya in wax yar la bixin karo taas oo kaa dhigeysa inaad ka duwan tahay kuwa kale. Ma jiro wax xaqiiqda ka fog. Waa run inay u muuqato in saldhig kastaa "kuu qaban karo tabta" adiga, xitaa kuwa ugu jaban ee aad ka heli karto Amazon ama Aliexpress. Laakiin amniga iyo isku halayntu waa laba sifo oo aan la siinin, qaar badan oo ka mid ah saldhigyadaas raqiiska ahna ma buuxiyaan shuruudaha ugu yar ee ay tahay in la waydiiyo qalab noocan ah. Saldhigga lacag la'aanta ah waa inuu ka fogaadaa kuleylka si uusan u dhaawicin batterigaaga iPhone, dusha sare ee dushana waa inuu ahaadaa mid ballaaran si aanad ugu cabbirin millimetir ahaan meesha aad dhigayso taleefankaaga. Dhibaatooyinkani kuma jiraan saldhiggan Just Mobile.
Shuruudahaas waa inaan sidoo kale ku darnaa naqshadeynta iyo tayada agabyada la isticmaalay. Sidii aan horey u sheegnay, saldhigyada oo dhan lama dhigi karo meel kasta, dhibaato aadan lahaan doonin Alubase, sababtoo ah inaad dhigto halka aad dhigato iskama hor imaaneyso hareeraheeda. Xaaladdayda, aluminium iyo midab madow ayaa si isku mid ah ugu habboon iMac-kayga dusha sare miiskayga shaqada. Halkaas ayaan ku hayaa si aan dib ugu cusbooneysiiyo iPhone-keyga inta aan la joogo kombiyuutarka, ama AirPods-kayga. Marka lagu daro inuu la jaan qaadi karo lacagta degdegga ah ee iPhone-ka, waxay ku habboon tahay lacag-bixinta degdegga ah (7,5W) ee Samsung.
Saldhiggu wuxuu leeyahay giraan dibedda ah oo aluminium ah, oo isku midab ah isla markaana ku dhammaata sida iMac ee cawl lacag ah. Qaybta gudaha waxay ka samaysan tahay caag madow oo leh giraan silikoon ah oo u adeegta si dhabarkaaga iPhone uusan u xoqin markuu taabanayo saldhigga, intaas waxaa sii dheer inuu yahay mid aan siibanayn si uusan iPhone u siiban oo uusan uga dhaqaaqin booska aad uga tagto, wax ku dhaca saldhigyo kale oo sababa in iPhone uusan dib u soo celin. Waxay ku habboon tahay kiisaska iPhone, oo ay ku jiraan Otterbox Defender, haan dhab ah.
Nooca 'Just Mobile' ayaa noo caadaystay si wanaagsan loo dhammeeyay, qalab fudud oo si fiican isugu jira wax soo saarka Apple. Saldhigga lacag la'aanta ah ee 'Alubase wireless' ayaa ah mid aan ka reebanayn, waana saldhigga ugu habboon ee la ag dhigi karo Mac-gaaga, ama haddii aad ka doorbido meel kale oo guriga ka mid ah iyada oo ay ugu wacan tahay naqshaddiisa maskaxeed iyo qalabkeeda heerka koowaad iyo dhammaystirka. Iyadoo aan lahayn laydhadh, astaamo garis la'aan, astaanta jm (Just Mobile) ayaa si dirqi ah looga ogaan karaa giraanta aluminium. Uma baahnid inaad xisaabiso meesha aad dhigeyso taleefankaaga casriga ah, ama aad ka walwasho kuleylka xad dhaafka ah markaad dib u buuxineysid, waxaad sidoo kale ku isticmaali kartaa sanduuqa lacag-bixinta wireless-ka ee AirPods. Sida dhammaan saldhigyada jiifka ah, waxay leedahay cillad aan awoodin inay aragto iPhone-kaaga inta ay dib u buuxinayso. Qiimuhu wuxuu ku saabsan yahay 54 Amazon (isku xirka), haa, kuma jiraan xeedho darbiga. Ma aha ikhtiyaarka ugu raqiisan ee aad ka heli doonto suuqa, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan oo la isku halleyn karo.
Saldhigga wireless ee Alubase
Naqshadeynta sare iyo qalabka
Dusha aan simbiriirixan
Kuma jiraan xeedho darbiga inkasta oo ay qiimo leedahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Kaliya Mobile Alubase, xarkaha fiilada wireless-ka ee desktop-kaaga
Jiilka soo socda ee iPad wuxuu yeelan doonaa shaashad OLED ah